Maamulaha Muuqaalka: Si wax ku ool ah u maamula xogta joogtada ah, xitaa laga bilaabo AutoCAD - Geofumadas
Nofeembar, 2014 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
Waxaan ku soo qaatay waqti aan dib u eego codsigan xiisaha leh, kaas oo aan hubo in aan daneyn doono dad badan oo isticmaala tiknooloojiyada CAD, kuwaas oo doonaya in ay la shaqeeyaan xogta GIS, sida kiiska shp, kml, gpx faylasha, ku xiro xogta macluumaadka ama adeegyada wfs .
Waxay ku saabsan tahay Maamulaha Muuqaalka, Horumarinta A in imanaya laba nooc: mid ka mid ah desktop, taas oo uu leeyahay gaar ah ka shaqeynayaan CAD-GIS, oo mid kale sida plugin ah AutoCAD, taas oo diyaar u ah qoraalkii ka AutoCAD in AutoCAD 2008 2015.
Waxaan la soconaa in maanta waxaa jira qalab badan oo ku saabsan suuqa, labada il furan iyo amuur, sidaa sameeyaan xal cusub waxay u baahan tahay shaqo si taxadir ah nusqaamaha ka tagay by iibiya software waaweyn oo caadi ah dadka isticmaala jadwal. Ka dib markii aad soo dejisay qalabka oo aad isku dayeyso ilo xogeed oo kala duwan, waxaan rumeysanahay in awooddeeda ay ka jawaabto su'aalaha ka soo jeeda xirfadlayaasha degaanka geesaha sida:
Miyaa suurtogal ah in lagu xiro AutoCAD oo leh PostGIS?
Sideen u bedelaa faylka KML ee CAD?
Miyaad wici kartaa adeegga WFS laga bilaabo AutoCAD?
Sidee loo rogaa xogta laga bilaabo Open Map Map ilaa faylka ESRI?
1 Maamulaha Muuqaalka ee miiska.
Qalabka moobilku wuxuu sameeyaa jadwalka muuqaalka, tarjumaadda, daabacaadda, daabacaadda iyo dhoofinta xogta jimicsiga. Tani uma baahna AutoCAD, maxaa yeelay waxay si madax banaan u shaqeysaa Windows.
Noocyada banaan ee taageera
Inkastoo Maareeyaha Muuqaalka ee muraayadda uu u muuqdo mid fudud, awoodiisa maareynta xogta GIS / CAD wuxuu ka baxsan yahay waxa ku jiray filashadayda asaasiga ah:
Akhri xogta laga helo ilaha ilaha 20 ku dhow, sida ku cad jadwalka midigta.
Waad daabacan kartaa vector iyo faahfaahinta xogta laga soo qaaday SHP, faylasha KML / KMZ ee Google Earth.
Waad akhrin kartaa loona badali karaa faylasha qoraalka sida ASCII qoraalka, sida kiiska iyo isuduwidda liistada qaabka CSV.
Vía OGR wax ka beddeli kartaa xogta DGN ee Microstation V7, iyo sidoo kale DXF, TAB / MIF oo ka Mapinfo. Sida akhriska E00 ee ArcInfo, GeoJSON iyo WFS.
Marka la eego xogta xogta, waxaad toos u diri kartaa PostGIS, SQLite iyo SQL Server.
Waxaad ka akhrisan kartaa ODBC (maaha isbeddel) ilaha kale ee macluumaadka.
Via FDO waxaad macluumaadka ka soo rogi kartaa AutoDesk SDF, akhriso Adeegga Adeegyada ee Website (WFS) iyo MySQL.
Waxay sidoo kale akhrin kartaa macluumaadka istaandarka GPS (GPX)
Inay u yeedho il waa in ay doortaan kaliya format ah, iyo kii saaxir ah u keenaysaa in go'aannada sida magaca caga lakabka, xogta u iman doontaa sida a su'aal, midabka, hufnaan, iyo haddii geesoolayaashu waxaa lagu hayo ama nooca xogta arc-Guntin ahbaa. Waqti ka dib waxaad ka heli doontaa waxyaabo aad u macquul ah, sida hawlaha jadwalka ah iyo jiido / hoos u dhacaya Windows Explorer.
Waxa kale oo suurtogal ah in la tilmaamo naqshadeynta iyo nidaamka tixraaca ee lakabka hore, oo codsanaya in loo bedelo mid kale; si aad u macquul ah haddii aan haysano xogta laga helo ilo kala duwan waxaanan rajeyneynaa in aan aragno isku mid ah qiyaasta. Waxay taageertaa nidaamyo badan oo tixraac ah, kuwaas oo la sifeeyn karo oo loo kala soocayo magaca, gobolka (dhulka / waddanka), koodhka, nooca (saadaalinta / joqoraafiga).
Shaqooyinka CAD-ga - GIS
Waxaa runtii waa aalad awood, maxaa yeelay, mar xogta bandhigay waa la bedeli karaa si fudud muujiyaan guryaha, kala layers yeelaa, si isbedel iyo ugu fiican: wac image asalka ama Maps Bing, MapQuest, ama kuwa kale.
Qaar ka mid ah farsamooyinka aan la arkin, haddii aan loo baahnayn, maaddaama ay yihiin kuwo caadi ah. Tusaale ahaan, fiiri in xulashada diiwaanka ay hawlgeliso doorashooyinka xulashada, sida tirtiridda, dhejinta xogta, soo-celinta xulashada ama abuurista lakab leh natiijooyinka la soo xulay.
Waxaa jira waxqabadyo kale, taas oo qodobkan aan si faahfaahsan u sharaxan, sida daabacaadda khariidadaha soo dejinta ama sifooyinka loo doortay, taas oo ah mid aad u miiran.
Soo dhoofinta qaabab kale
data dulinka mar lagu tilmaamay in ilaha xogta guddi loo dhoofiyo kartaa qaabab 16 soo socda: SHP, KML, KMZ, ASC, CSV, NEZ, TXT, XYZ, UPT, DB, SQLite, SDF, DGN, DXF , tab iyo MIF.
Eeg in dhoofintani ay keeni doonto adeegyo caadi ah, laakiin hadda maahan wax dalab ah, sida xogta furan ee Open Maps (OSM) iyo u dhoofin DXF ama SHP.
Nadaamyada la badbaadiyay sida hawlaha
Maareeyaha Mabda'a ma aha qalab dhammaystiran oo GIS ah, maadaama ay xalal kale yihiin, laakiin isku xirka maamulka xogta. Si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay muuqaal ah in qof kasta oo isticmaala GIS uu filanayo inuu u isticmaalo waxqabadkiisa. Tusaale ahaan waa howlaha loo yaqaan 'Tasks', oo aad ka badbaadin karto jadwalka si aad mar labaad wacdo, tusaale ahaan:
Waxaan doonayaa in aan badbaadiyo lakabka xogta la yiraahdo parks.shp sida format KML, iyo daaha waa hore ee CRS nad 27 / California Area aan, iyo waxaan rajeynayaa in uu noqdo WGS84 la isticmaalayo Google Earth. Intaa waxaa dheer, isticmaal magaca xogta magaciisa oo ah magaca iyo GOOBAHA sida sharaxaadda, midab buluug ah oo buuxa iyo jaale huruud ah, 1 pixel width iyo 70% daahfurnaanta. Dhulkuna wuxuu kufaraxsan yahay dusha sare iyo khariidad gaar ah ee Dropbox.
Markii aan markii ugu horeysay kusheego, way i weydiineysaa haddii aan rabo inaan u keydiyo sida Task, in ay fuliso wakhti kasta, xitaa laga bilaabo daaqada amarka Nidaamka Hawlgalka.
Haddii aan ku badbaadiyo sida Hawlaha, marka aan la tashado, waxay yeelan doontaa macluumaadka soo socda:
Riix 'Cillad' si aad u fuliso doorashooyinka soo socda:
- Faylka: Khariidadaha Gaaban: \_ Sample data \_ SHP \_ Parks.shp
- Faylka: C: \_ Users \_ galvarez.PATH-II \_ Downloads \_ Parks.kml
- Miiska bartilmaameedka waa la qori doonaa haddii loo baahdo
- Waxay isku beddeli doontaa isku-duubnaanta ilaha iyada oo la raacayo sifooyinka soo socda:
- Halkan waxaa laga soo xigtay CRS: NAD27 / Aaga California
- Bartilmaameed CRS: WGS 84
- Hawlgalka: NAD27 ilaa WGS 84 (6)
Gaadiidka iyo Mashruuca
Waxaad qeexi kartaa dariiqyada gaaban ee loo yaqaan 'Shortcuts', oo la mid ah waxa ArcCatalog ku sameeya, adiga oo ogaanaya ilaha xogta oo inta badan lala tashanayo. Faylka waxaa sidoo kale lagu kaydin karaa iyadoo la kordhinayo SUPM, iyada oo la xafidayo dhammaan qaababka sida mashruuca QGIS ama ArcMap MXD.
Ruqsadaha iyo Qiimaha Muuqaalka Maaraynta Muuqaalka
Waxay noqon kartaa kala soco waraaqaha maxkamada oo ah Maamulaha Muuqaalka. Waxaa jira saddex qaybood oo ah qalabkan: Basic, Standard iyo Professional, oo leh farsamooyin masaafo leh, sida ku cad miiska soo socda:
Guryaha Guud Heerka Xirfadaha Aasaasiga ah
Maareynta iyo maareynta map
Jooji oo ku dheji xogta khariidada
Khariidadaha asalka ah (jidadka, sawirrada, jilibka)
Xulo oo kuhesho sifooyinka
Macluumaadka dhoofinta isticmaalka xafiiska ama CAD-yada
Daabacaadda sawirrada ama sifooyinka gaarka ah
La-tashiga xogta jimicsiga
Samee lakabyo cusub xulashada ama weydiimaha
Laylisyada mashruucyada khariidadaha
Kala saarida lakabyada lakabyo cusub
Lakabyada gudaha iyo dibedda
Iska-qaad cutubyada laga helo ilaha xogta dibedda
Nuqul ka samee qoryaha
La qabsashada miisaska u gaarka ah (gaaban)
Helitaanka feylalaha goobta (SHP, GPX, KML, OSM, iwm.)
Maareynta ilaha macluumaadka u gaar ah
Helitaanka xog ururiyeyaasha xog ururinta (SQL Server, PostGIS, iwm.)
Helitaanka xiriiro kale (WFS, ODBC, iwm)
Raadi oo beddel xogta
Tafatir xogta alphanumeric
Qoraal fara badan oo xog ah
Ka saar sifooyinka aan loo baahnayn
Keydso layers-beddelka lakabyo cusub
Hawlaha iyo Hawlaha
Nidaamyada soo dejinta iyo dhoofinta
Awoodsiinta hababka loo marayo hawlaha (hawlaha)
Hawlaha ka hawl geli daaqada nidaamka hawlgalka
Qiimaha Shatiga Shakhsiga
2 Maamulaha Muuqaalka ee AutoCAD.
Fidinta Tani waxay ku haboon tahay in lagu daro awoodaha xuduudaha ah ee loo yaqaan 'versions of AutoCAD', inkastoo ay sidoo kale ka shaqeyso Civil3D, Map3D iyo Architecture.
Xaaladdan oo kale, waxaan isku dayay iyada oo la adeegsanayo AutoCAD 2015, marna la rakibay muraayad ku taal Ribbon oo leh qaababka qaar. Dabcan, ma aha dhammaan qaybaha Desktop, sababtoo ah AutoCAD waxay leedahay amarradiisa u gaarka ah.
Haddii aad abuurto ilo xog ah, kaliya ku riix "Ilaha xogta isticmaalaha"Xulo"Ilaha xogta cusub" Ka dibna dooran nooca ilaha, kuwaas oo ah isku mid ah sida midda desktop-ka.
Waxaan ognahay in qaar ka mid ah tani waa suurto gal ka AutoCAD Map iyo Madaniga 3D via OGR, si kastaba ha ahaatee marka aan dib u eegaan wax walba oo ka dhigaysa Manager astaanta waxaan ognahay in ay abuuray ee arjigan ku fikiray leh uga dhigayeen in muuqaalada oo dhan in dadka isticmaala of AutoCAD Ma sameyn karaan si haboon. Qeybaha sida wacaya lakabka PostGIS, si ay u bixiyaan tusaale, ama adeeg WFS laga soo daabaco lakabka GeoServer oo muujinaya bakhaarka xogta Oracle Spatial.
Si aad u aragto shaqeynta Macalinka Muuqaalka ee AutoCAD, waxaan ka dhignay fiidiyowgaan tusaalooyin ah daneynteena.
Fiidiyowga ayaa markii horeba loogu yeeray lakabka shp ee deegaanka, iyada oo waddanka xaddidan tahay, markaa mid ka mid ah degmooyinka ayaa xadidaya. Later, xiriir la leh adeegyada WFS ayaa la sameeyaa waxaana ugu dambeyn lakabka faylasha Microstation DGN ee warqadaha arc-node.
Waxaa la tilmaami karaa in qodobada ay soo socdaan sida blockCityCAD, oo loo dhan yahay in kooxo kala duwan loo isticmaalo iyada oo ku saleysan sifooyinka xogta. Sidoo kale waa in la ogaadaa haddii ay noqon doonaan polylines, polylines 2D ama polymines 3D.
Markaas, haddii aad muujiso inaad ku soo dhejisey sifooyinka sida xogta xayeysiiska ah ee XML, waxay imaan doonaan sida Shayada Xogta La Dheereeyay (EED). Qaybtani waxay la mid tahay waxa Bentley Map ay samaysay, in la soo galo xogta la socota ee DGN ee xogta XFM ee la kordhin karo.
Liisaska Maamulaha Mabaadi'da ee AutoCAD
Waxaa jira laba nooc oo Ruqsada, haddii ay taasi ku call a aasaasiga ah Edition iyo Standard Edition labaad ah, kaas oo ku dhowaad waa isku mid, sida lagu qoray liiska ay soo socda muuqaalada:
Ku dhoofi xogta mawaadinka ah ee sawirrada AutoCAD
Isbeddelka isuduwaha ee soo dejinta
Guddi xog-wareysi oo kuxiran (EED / XDATA). Tilmaame-yaashaani waxay ku jirtaa oo keliya qaybta Standard.
Awoodaha soo dejinta
Noocyada waxaa loo soo dhoofiyaa sawir cusub oo cusub
Noocyada waxay u imaan karaan lakabyo ku salaysan oo ku salaysan qiimaha xogta
Isticmaalida qaybaha ama centroids
Isku-xidhka xaddidan oo ku saleysan xogta xogta
Buuxinta iyo hufnaanta cirbadaha
Haddii ay muhiim tahay
Sareeynta iyo dhumucdiisida xogta xogta
Macluumaadka laga soo qaato jadwalka sida EED. Tilmaame-yaashaani waxay ku jirtaa oo keliya qaybta Standard.
Helitaanka xogta qallafsan (SHP, GPX, KML, OSM, iwm.)
Gaaritaanka ilaha macluumaadka. Tilmaame-yaashaani waxay ku jirtaa oo keliya qaybta Standard.
Helitaanka xarumaha qaaska ah. Tilmaame-yaashaani waxay ku jirtaa oo keliya qaybta Standard.
Helitaanka xiriiro kale (WFS, ODBC, iwm). Tilmaame-yaashaani waxay ku jirtaa oo keliya qaybta Standard.
Qiimaha Maamulaha Muuqaalka ee AutoCAD
The Basic Edition wuxuu leeyahay qiimaha US $ 99 iyo Heerka Standard Heerka US $ 179
Labada qalab waa xalal xiiso leh. Maamulaha maxaliga ah ee miisaanku waa mid aad u qiimo badan, tanoo ah shaqooyinka isbedelka, dib u habaynta, dhoofinta iyo falanqaynta xogta waxay ku nool yihiin magacooda. Inkasta oo aan soo sheegnay, waa qalab dhammaystiran oo dhexdhexaad ah oo u dhexeeya hababka loo sameeyay CAD iyo isticmaalka macluumaadka laga sameeyo software GIS.
Midda labaad waxay iila muuqataa in ay sii kori doonto waxoogaa ka badan sidii ay uga heli laheyd jawaab celin badan oo ka yimid kuwa isticmaala; maxaa yeelay hadda waxay ku dhammaataa waxa AutoCAD samayn karin.
Tixgelinta qiimaha, maalgashadu maaha mid xun, haddii aan xisaabta ku darno faa'idada ay keeni karto.
Si aad u ogaato liiska qiimaha, waxaad ka fiirin kartaa boggan. http://www.spatialmanager.com/prices/
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sifooyinka iyo wararka, tani waa Maareeyaha Muuqaalka ama Wiki
Post Previous«Previous Raadi oo Bedelaan Isticmaalka Hadiyadaha joogtada ah: Microstation
Post Next Ma aha isku mid. Kala duwanaanshaha khariidadaha hore iyo khariidadaha taariikhiga ahNext »